Gegida dayuuradaha ee Frankfurt waxa geeyey 87 kiosks oo awood u leh biometric-ga ugu dambeeyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Gegida dayuuradaha ee Frankfurt waxa geeyey 87 kiosks oo awood u leh biometric-ga ugu dambeeyay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Gegida dayuuradaha ee Frankfurt waxa geeyey 87 kiosks oo awood u leh biometric-ga ugu dambeeyay.
Gegida dayuuradaha ee Frankfurt waxa uu fuliyaa 87 ka mid ah SITA's TS6 Kiosks ee ugu dambeeyay guud ahaan Terminal 1 iyo 2 si loo horumariyo khibrada rakaabka.
Kiosks-ka-shaqeeya-biometric-ga ee SITA iyo adeegyada fariimaha shandadaha ayaa beddela Madaarka Frankfurt.
Dukaamada jeegeynta ee SITA ee TS6 waxay u ogolaataa rakaabka inay si degdeg ah u soo galaan oo ay u helaan bacaha adeega iska tuurista.
Dukaamadu waxay si wada jir ah ula shaqeeyaan SITA Flex waxayna siiyaan rakaabka khibrad adeegsi oo midaysan oo ku saabsan shirkado badan oo diyaaradeed.
SITA, oo ah bixiyaha tignoolajiyada warshadaha gaadiidka hawada, ayaa ku dhawaaqday in la geynayo tignoolajiyada ballaaran Madaarka Frankfurt si kor loogu qaado khibrada rakaabka iyo kordhinta hufnaanta shaqo ee garoonka. Hawlgalka ayaa ka kooban rakibaadda 87 kiosks ee SITA TS6 oo awood-biometric-ga leh waxaana la filayaa in la dhammeeyo dhammaadka sanadkan.
SITADukaamada jeegeynta ee TS6 ee kala duwan ayaa u oggolaanaya rakaabka in ay si degdeg ah u soo galaan oo ay u helaan bacaha adeegyada meel dhigista shandad iska-qaadka ee dambe. Dukaamadu waxay si wada jir ah ula shaqeeyaan SITA Flex oo sii rakaabka khibrad adeegsi oo midaysan oo dhan shirkado badan oo diyaaradeed, kordhinta fududaynta isticmaalka iyadoo sidoo kale la dhimayo meelaha taabashada jirka ah.
Rakaabku waxay ku sii ahaanayaan kantaroolka ikhtiyaarkooda is-adeegga, laga bilaabo hubinta ilaa kiishka is-booska iyagoo isticmaalaya dukaanka karti u leh biometric-ga dareenka leh. Kan cusub SITA Dukaanka TS6 wuxuu ahaa ku guuleystaha abaalmarinta 2021 IF Design abaalmarinta ee naqshadeynta jilicsan, waara, iyo la qabsiga, kaas oo loo habeyn karo si ay ugu habboonaato naqshadeynta astaanta garoonka iyo baahiyaha macaamiisha gaarka ah. Naqshadaynta modular waxa kale oo ay ka dhigan tahay wanaajinta iyo wax ka beddelka la samayn karo iyada oo aan la beddelin dhammaan dukaamada, oo keenaya waxtarka kharashka dheeraadka ah iyo faa'iidooyinka joogtada ah.
Kiosk-ka SITA ee TS6 waxa loo isticmaali karaa jeegaraynta iyo bacaha ku dhejinta wadada u xaadhaysa gabi ahaanba taabasho la'aan, safar rakaab mobaylo ah. Gegida Gegida Diyaaradaha ee Frankfurt waxa ay ka dhigan tahay hirgelinta SITA ee ugu weyn Yurub.
Dr. Pierre-Dominique Prümm, Agaasimaha Fulinta ee Duulista & Kaabayaasha ee Fraport, ayaa yidhi: "Soo bandhigida rakaabka habab hal abuur leh, badbaado leh, iyo habab ka wanagsan oo lagu safro iyadoo sidoo kale la hubinayo inaan haysano adkeysi iyo hawlo garoon diyaaradeed oo hufan waa muhiim marka warshadeena ay ka soo kabato saamaynta masiibada. SITA waxay nagu taageertaa inaan gaarno hamigaan, waxaana rajeyneynaa inaan soo dhaweyno rakaab badan oo hawada dib ugu soo laabanaya."
Sergio Colella, Madaxweynaha, Yurub, SITA, wuxuu yiri: "Waan ku hanweynahay inaan sii wadno taageerada garoommada diyaaradaha sida Frankfurt si ay uga soo kabtaan saameynta masiibada. Tiknoolajiyadu waxay haysaa furayaasha furaha socdaal caqli badan oo badbaado leh dhammaan, dib u soo celinta dakhligii lumay 18-kii bilood ee la soo dhaafay, iyo hubinta hawlgallo dabacsan oo la qabsan kara duruufaha lama filaanka ah ee berrito. Warshadaha gaadiidka cirka oo aad u adag oo waara ayaa ka faa'iidaysan doona rakaabka, dhaqaalaha, iyo shaqooyinka."